Nokutsvaga webhusaiti pa https://pdf.to , uri kubvumirana kusungirwa nemitemo yebasa, mitemo yose inoshanda uye mitemo, uye kubvumirana kuti iwe unofanirwa kutevedza nemitemo ipi inobvira yemunharaunda. Kana iwe usingabvumirani nemamwe emashoko aya, iwe unorambidzwa kushandisa kana kuwana peji iyi. Zvinhu zvawanikwa mune webhusaiti ino zvakachengetedzwa nemutemo wekodzero uye yekutengeserana.
2. Kushandisa License
Chibvumirano chinobvumirwa kukodha kamwe chete kopi yezvinhu (mashoko kana software) paPdf.to webhusaiti yega yega, kwete yekutengeserana kwekutarisa chete. Iyi ndiyo mvumo yeisensi, kwete kutumidzwa kwezita, uye pasi peyi reisiti iwe haungatori:
kuedza kubvisa kana kuchinja unyanzvi chero ipi zvayo inowanikwa paPdf.to website;
kubvisa chero kodzero kana zvimwe zvinyorwa zvinyorwa kubva kune zvigadzirwa; kana
kutumira zvinhu kune mumwe munhu kana 'girazi' zvinhu pane imwe yese server.
Ivhareji ichanyangarika zvachose kana iwe ukaputsa chero ipi zvayo yezvibvumirano uye inogona kupedzwa nePdf.to chero nguva. Pakugumisa kuona kwako kwezvinhu izvi kana pakagumiswa kwechirongwa ichi, unofanira kuparadza chero zvinhu zvakakanganwa zviri muzvinhu zvako kana zviri mumagetsi kana zvakadhindwa.
Zvinhu zviri paPdf.to's website zvinowanikwa pane 'sezvazviri'. Pdf.to haigadziri zvivimbiso, zvinoratidzirwa kana zvinoreva, uye zvino zvinorega uye zvinorega zvimwe zvivimbiso zvose zvinosanganisira, zvisingarevi, zvinoreva zvivimbiso kana mamiriro ekutengeserana, kufanana kwechinangwa chaicho, kana kusina kukanganisa kwepfungwa yekudzidzira kana kutyora kodzero.
Uyezve, Pdf.to haibvumirwi kana kuita chero mumiririro pamusoro pekururama, zvichida mhinduro, kana kuvimbika kwekushandiswa kwezvinhu pa webhusaiti yepamusoro kana kuti zvimwe zvine chokuita nezvinhu zvakadaro kana pane chero masayiti akabatanidzwa kune ino.
Pasinei nenyaya iyo Pdf.to kana vatengesi vayo vanogona kuve nekodzero yezvimwe zvikuvadza (kusanganisira, pasina kukanganisa, kukanganisa kwekurasikirwa kwedata kana purofiti, kana nekuda kwekuvhiringidza kwebhizimisi) inobva pakushandiswa kana kusakwanisa kushandisa zvigadzirwa paPdf.to webhusaiti, kunyange kana Pdf.to kana Pdf.kumumiririri ane mvumo akapiwa ruzivo rwemuromo kana kunyora nezvekugona kwekukuvara kwakadaro. Nokuti dzimwe hurumende haibvumiri zvikanganiso pane zvinoreva mavimbiso, kana zvikwereti zvemhosva yezvakakosha kana zvinokanganisa, izvi zvisingagoni kushanda kwauri.
Zvinhu zvinowanikwa paPdf.to webhutaneti zvinogona kusanganisira teknolojia, typographical, kana kuti mapikicha mapikicha. Pdf.to haibvumirisi kuti chero chezvinhu zvepawebsite yedu yakarurama, yakakwana kana ino. Pdf.to inogona kuchinja kuzvinhu zviri pa web site yayo panguva ipi zvayo pasina chiziviso. Zvisinei Pdf.to haisi kuita kuzvipira kupi nekugadzirisa zvinhu.
Pdf.to haina kuongorora yese yemasayiti akabatanidzwa kune webhusaiti yayo uye haisi mhaka yezviri mukati chero ipi zvayo yakabatana. Kubatanidzwa kwehupi hupi hunobatanidza hakurevi kuvimbiswa kwePdf.to kwewebsite. Kushandisa chero iyo yakadaro inotsigirwa webhusaiti iri pangozi yomupenzi.
Pdf.to inogona kuvandudza mazwi aya ekushandira kwewebsite yayo panguva ipi zvayo pasina chiziviso. Nokushandisa iyi webhusaiti iwe uri kubvumirana kuti uzvisungirirwe ikozvino ikozvino kwemashoko emitemo yebasa.
8. Dare Rinodzora
Aya mazwi nemitemo inotungamirirwa nekugadziriswa maererano nemitemo yeConnecticut uye iwe nenzira isingatenderwi kuenderera kune hutongi hwakakwana hwematare mune iyo Hurumende kana nzvimbo.
Vatori vechikamu vePDF.to's services kurodha, kushandura, kuwana uye kushandisa zvinhu uye masevhisi panjodzi yavo. PDF.to haiongorore zvemukati zvevatengi. PDF.to haizovi nemhosva kune chero kukuvadzwa kunotaurwa nekuda kwePDF.to's services, ruzivo, kana zvigadzirwa. Mumwe neumwe Mutori wechikamu ndiye ega anokoshesa zvinhu zvese zvakachengetwa nePDF.to, kunyatsoita zvinhu zvinosanganisira mawaranti, uye nekutora mvumo dzese dzinodikanwa kune ma hyperlink uye zvekushambadzira. PDF.to haigadzire kana kuratidza garandi maererano nekururama, mhando, kana hunhu hwemashoko anogona kuwanikwa nevashandisi kana vatori vechikamu kubva paInternet kuburikidza nekushandisa masevhisi ePDF.to.
Ndokumbirawo muone kuti zvese zvinoshandiswa nevashandisi uye zvemukati zvinobviswa mukati memaawa ekuteedzera, uye yavo yakashandurwa matieral inobviswa mukati memakumi maviri nemana maawa zvakare, neimwe pfungwa kungochengetedza kwenguva pfupi.
Kana iwe uchidavira kuti chero chinhu chiri paPDF.chinokanganisa chero copyright ipi yaunayo kana yaunodzora, unogona kutumira Chiziviso chakanyorwa cheAlleged Copyright Infringement ("Notification") kune yedu yakasarudzika Dhijitari Millennium Copyright Act ("DMCA") Mumiriri anozivikanwa pazasi. . Mune Notification, iwe unofanirwa:
(A) Ziva zvakadzama zvakaringana iro rekodhi rekodhi basa kana chivakwa chivakwa icho chaunoti chakatyorwa kuti tikwanise kuwana izvo zvinyorwa;
(B) Ziva iyo URL kana imwe nzvimbo chaiyo paPDF.to iyo ine izvo zvinhu zvaunoti zvinokanganisa copyright yako;
(C) Ipa iyo yemagetsi kana yemasaini siginecha yemuridzi wekopi kana munhu anotenderwa kuita panzvimbo yemuridzi;
(D) Sanganisira chirevo chekuti une chivimbo chekutenda kuti iko kukakavadzana kwekushandisa hakubvumirwe nemuridzi wekopi, mumiriri, kana mutemo;
(E) Sanganisira chirevo chekuti iwo ruzivo arimo mune yako Notification ndeyechokwadi uye unopupura pasi pechirango chekunyepa kuti iwe ndiwe muridzi wekopi kana mvumo yekuita panzvimbo yemuridzi wekodzero. uye,
(F) Sanganisira zita rako, kero yekutumira, nhamba yefoni uye email kero.
Unogona kutumira Notification yako kune edu akasarudzika DMCA Mumiriri neemail, fax, kana tsamba seyakanyorwa pazasi:
411 S. Sangamon Mugwagwa
Fax ku: 312-803-1667
Kana PDF.to yawana Notification yakakodzera, inobvisa nekukurumidza kana kuremadza kuwanikwa kwezvinhu zvinonzi zvinokanganisa uye inogumisa maakaundi akanangana neizvozvo (kana zvichibvira) zvinoenderana neDMCA.
PDF.to yatora mutemo wekumisa, mumamiriro ezvinhu akakodzera uye nekufunga kwayo chete, nhengo dzinoonekwa dzichidzokorora kutyora. PDF.to inogona zvakare mukufunga kwayo kwekuganhurira kuwana paPDF.to uye / kana kumisa kushandiswa kwayo nemunhu wese anotyora chero kodzero yehungwaru yevamwe, kunyangwe kana paine kutyorwa kwakadzokororwa.
PDF kune BMP
WebP kune PDF
GIF kune PDF
PSD kune PDF
253,649 kutendeuka kubva muna 2019!
Taura nesu - Nezvedu - API - Yakavanzika Policy - Zviga zvebvumirano - Twitter
Yakagadzirwa na nadermx - © 2021 PDF.to
Iwe wapfuura yako yekutendeuka muganho weatatu paawa, unogona kushandura mafaera ako mu 59:00 kana kusaina uye shandura zvimwe izvozvi.
Batch kugadzirisa inongowanikwa kune vashandisi vePro. Simudzira izvozvi kuita mafaera akawanda kamwechete.
Wana mukana usingaperi kana Edza imwe faira